"लाैन जात्रै भो"टेलीफिल्मका पात्र "धते" अरुण पोख्रेलको जीवनकथा | News Nepal
>>प्रचण्ड भन्छन्ः राजनीतिमा जस्तो गीतसंगितमा विभेद हुँदैन, मैले पनि युवास्थामा खुवै गीत गाएको छु
>>मेयर विद्यासुन्दरको विलाैना- भीमसेन दाई उपमेयरलाई सम्झाइदिनु पर्‍यो, मलाई टेर्दै टेर्नु भएन !
>>बीआरआई सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन नेपाली मै सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)
>>रीनाको बलत्कार हत्या नभएको पोस्टमार्टम प्रतिवेदन सार्वजनिक
>>श्रीलंका वम विष्फोटबाट धन्न जोजियो विनोद चाैधरीको पाँचतारे होटल ताज समुन्द्र
“लाैन जात्रै भो”टेलीफिल्मका पात्र “धते” अरुण पोख्रेलको जीवनकथा
काठमाडाैँ १७,असोज । नेपाली रङग मञ्चमा थुप्रै बिधा को बिच मा हास्य टेलीश्रृङखलाले आफ्नो बर्शोच्चो कायम गर्न सफल भएको छ । पछिल्लो समय च्याउ उम्रे जस्तै गरि थुप्रै टेलि शृङखला स्थापना भएका छन , तर ति हास्य टेलिशृङखालको बिचमा पछिल्लो समय दर्शकको मन जित्न सफल “लाैन जात्रै भो” टेलिशृखलाले नेपाली रङगमञ्चको बजारमा आफ्नो बर्शोच्चो जमाउने दाैरानमा छ ।
लाैन जात्रै भो टेलीफिल्म हरेक बुधबार साँझ ९ बजे टिभी टुडे मार्फत प्रशारण हुने गर्दछ । यस टेलीफिल्मले समाज ज्वलन्त विषयलाई उठ्ठान गरेर निर्माण गरिने यस टेलिशृङखालाको निर्देशन ध्रुब राई र दिपेन्द्र राई ,मुख्य सहायक निर्देशक अन्जु हमाल हुन। लाैन जात्रै भो टेली फिल्मका एक मुख्य पात्र धते अर्थात अरुण पोख्रेल ले सामजको एक बिघ्न चतुर्र, पात्रको रुपमा प्रस्तुत छन ।
लाैन जात्रै भो टेली फिल्मका मुख्य पात्र धते अर्थात अरुण पोख्रेल
अरुण पोख्रेल अर्घखाची जिल्ला को मालारानी गाँउपालिका मा जन्मेका उनी सानो हुँदा देखी कला क्षेत्र मा लाग्ने अनी कलाकार बन्ने ठुलो चाहना थियो । उनी स्कुल पढ्ने उमेर देखिनै कलाकार बन्ने आैधि इच्छा भएकै कारण स्कुल स्तर,स्थानिय स्तरका स्टेज कार्यक्रम मा नछुटाई सहभागी हुन्थे । उनी सानै देखी मेरि बास्सै टेली शृङखला का चर्चित हास्यकलाकार सितराम कट्टेलको अभिनय बाटै सानैदेखि प्रभावित थिए । जब एस.एल.सी को परिक्षा सकेर पढाई र कालाकारिताको ठुलो अभिलासा बोकेर काठमाडौं छिरेका अरुण यो नयाँ शहर ,नयाँ परिबेशमा उनलाई काठमाडौं बिल्कुलै नयाँ थीयो । कलाकार बन्ने इच्छा आकांक्षा बोकेर काठमाडाै छिरेका अरुण त्यति सजिलो थिएन काठमाडाैको परिबेश संग घुलमिल हुन । अन्त: अरुण काठमाडाैँ को परिबेश सगं सिगाैरि खेल्दै आफ्नो अध्ययन सगै कलाकार बन्ने लक्षप्रति नडक्मगाई निरन्तर अघि बडि रहे । अहिले उनि बिबि एस दोस्रो बर्षमा अध्ययन गर्दै जिन्दगि ३/४ वटा पाटा अध्यन , कालाकारिता , नोकरि लाई सामानान्तर अघि बढाई रहेको छन ।
“लाैन जात्रै भो” टेली फिल्ममा उनी सामजको एक चतृर्र, आफुलाई बिग्न बाठो ,जानकार सोच्ने पात्र धते को भुमिकामा प्रस्तुत छन ।
लाैन जात्रै भो नेपाली हास्य टेलीफिल्म DTARBSN को उत्पादन हरेक बुधबार साँझ ९ बजे Tv today मार्फत प्रशारण हुन्छ।
प्रकाशित मिति : 2018-10-03
सुरज कालाखेतीको ‘मायालु आउने बाटोमा’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गायक सुरज कालाखेतीले 'मायालु आउने बाटोमा' बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । रिकेस गुरुङको संयोजकमा रहेको उक्त...
काठमाडाैं । गीत संगितले कुनै पनि क्रान्ति वा संघर्षलाई उत्कर्षमा पुर्याउनका लागि अहम भुमिका खेल्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दाबी गरेका...
जात्रै जात्राको ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडाैं । प्रदीप भट्टराईको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको चलचित्र जात्रै जात्राको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ओएसआर डिजिटलको आधिकारीक युट्युब...
सुनिल ग्रोबर (डा. गुलाटी) ‘द कपिल शर्मा शो’मा फर्कदै
काठमाडाैं । भारतीय कमिडियन सुनिल ग्रोबर ‘डाक्टर गुलाटी’ कपिल शर्मा शोमा फर्कने भएका छन् । अष्ट्रेलियाबाट स्वदेश फिर्ता हुने बेला...
विवाह गरेकै दिनमा नायक आर्यन सिग्देललाई पुत्र लाभ !
काठमाडाैं । अभिनेता आर्यन सिग्देललाई पुत्र लाभ भएको छ । नेपाली चलचित्रका चल्तीका नायक सिग्देललाई पुत्र लाभ भएको उनको पारिवारीक...
मनिषा कोइराला भन्छिन्–नेपाल पृथ्वीको स्वर्ग देश हो,विश्वभरलाई देखाउने मन छ
काठमाडौं । हातमा ट्रेकिङ स्टिक, कालो क्याप अनि सेतो स्वेटरमा सगरमाथाको काखमा हिँड्दैथिइन् बलिउड नायिका मनिषा कोइराला । कहिले उनको...
दरबारमार्गको किङ्स लाउन्जाको शाखा पोखरामा, बैशाख अन्तिममा यी हस्तीबाट हुँदै उद्घाटन
काठमाडाैं । राजधानीको दरवारमार्गका रहेको किङ्स लाउन्जाले पर्यटकीय नगरी पोखरामा पहिलो शाखा विस्तार गर्ने भएको छ । राजधानीको निकै व्यस्त...
अन्ततः गुगल र एप्पलले गरे टिकटक ब्लक
काठमाडौं । छोटो समयमै लोकप्रिय बनेको भिडियो एप टिकटक भारतमा ब्लक भएको छ । भारत सरकारको आग्रहमा गुगल र एप्पलले...
तपाईंको यो वर्ष कस्तो हुनेछ हेर्नुस्र राशिफल
मेष यो राशीलाई यस वर्ष ग्रहको प्रभाव समष्टिमा राम्रो रहने देखिन्छ । वर्षारम्भमा तृतीय राहु, नवम गुरु शनि वक्र रहेपनि...